၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေး Archives > Page3of5> မွန်သတင်းအေဂျင်စီ
Home / ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေး (page 3)
မွန်ပြည်နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ပါတီစုံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ
September 24, 2015 ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ, ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေး 0
မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၂၀၁၅ ခုနှစ် ပါတီစုံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ
NLD သထုံမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါ်မာမာခိုင် အင်တာဗျူး
September 23, 2015 ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မေးမြန်‌းချက်‌, ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေး 0
မေး-ဘာကြောင့်ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်အဖြစ်အရွေးခံရတာလဲ? ဖြေ-အန်တီက NLDပါတီစပြီးတည်ထောင်ကတည်းက သထုံမြို့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါခဲ့တယ်။ အမေစုရဲ့ခေါင်းဆောင်မှူကိုလည်း အရမ်းလည်းယုံကြည်တယ်။ အမေစုကို
ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ် ရပ်/ကျေး ၆၇ အနက် ၄၁ နေရာမဲပေးခွင့်မရ
September 22, 2015 ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ သတင်း, ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေး 0
မင်းသုတ – ကရင်ပြည်နယ်၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်အတွင်း ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စု ၆၇ ရှိသည့်အနက် ၄၁ နေရာ မဲပေးခွင့်မရကြောင်း ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် မွန်အမျိုးသားပါတီ MNP လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများက လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီ IMNA နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်တွင် ပြောသည်။
NLD ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါ်ခိုင်ခိုင်လဲ့ အင်တာဗျူး
September 20, 2015 ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မေးမြန်‌းချက်‌, ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေး 0
မင်းစိုင်းမွန် မေး-ဒီလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တစ်ယောက်အဖြစ်ဘာကြောင့် အရွေးခံဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလဲ?
ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်ရှိ မွန်ရွာပေါင်း ၃၄ ရွာ မဲပေးခွင့်မရှိ
September 19, 2015 ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ သတင်း, ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေး 0
ခတ္တာနန်း – ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ ယခုလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ထုတ်ပြန်လိုက်သည့် မဲဆန္ဒရှင်များစာရင်းအရ
ဦးအောင်ကျော်သူ သထုံ(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း NLD ပါတီ
September 18, 2015 ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မေးမြန်‌းချက်‌, ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေး 0
မေးမြန်းသူ-မင်းစိုင်းမွန် မေး-ဒီ၂၀၁၅မှာ ဘာဖြစ်လို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်အဖြစ် အရွေးခံရတာလဲ? ဖြေ-မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းမှာ တောက်လျှောက်လူငယ်အခန်းကဏ္ဍပါဝင်မှုမှာ အရမ်းအားနည်းခဲ့တယ်၊ အဲဒါကြောင့် ကိုယ်နဲ့အခုလက်ရှိ ကြုံတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်လည်းတတ်အားသမျှလုပ်ပေးနိုင်မယ် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်လို့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရခြင်းဖြစ်တယ်။
နိုင်ငံရေးပါတီများ မဲဆွယ်စည်းရုံးရာတွင် စောင့်ကြည့်ခံနေရ
September 18, 2015 ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ သတင်း, ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေး 0
မွန်ပြည်နယ် သထုံမြို့နယ်တွင် NLD ပါတီမှ ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအတွက် မဲဆွယ်စည်းရုံးရာတွင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ထောက်လှမ်း၊ စာင့်ကြည့်၊ မှတ်တမ်းယူမှုများ ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
မွန်ပြည်နယ်တွင် ပဋိပက္ခဖြစ်နိုင်သောမဲရုံနယ်မြေများသတ်မှတ်ထားသော်လည်း မဖြစ်ပွားနိုင်ဟုရဲမှူးကြီးယူဆ
September 17, 2015 ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ သတင်း, ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေး 0
နေစောရွှေ – နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်နေ့ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ရဲတပ်ဖွဲ့လုံခြုံရေး သတ်မှတ်ချက်အရ မွန်ပြည်နယ်အတွင်း ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနိုင်ခြေရှိ
AMDP ကိုယ်စားလှယ်လောင်း နိုင်ဦး(နိုင်တလချမ်း) အင်တာဗျူး (သံဖြူဇရပ် ၂ -ပြည်နယ်လွှတ်တော်)
September 8, 2015 ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ, ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေး 0
မင်းစိုင်းမွန် မေး-လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်အယောက်အဖြစ် ဘာကြောင့်အရွေးခံဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသလဲ? ဖြေ-ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ကတည်းကကျွန်တော် မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီထဲ၀င်ပြီးတော့ တာ၀န်ယူလာတာ ၅နှစ်ရှိပြီးပေါ့။ အဲဒီမှာ မွန်ပြည်နယ်အတွက် လွှတ်တော်အတွင်းတိုက်ပွဲ၀င်တာပေါ့၊ မွန်ပြည်သူတွေရဲ့အခွင့်အရေး အတွက်တောင်းဆိုလာတာ အထိုက်အလျောက်ရခဲ့ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် လိုအပ်ချက်တွေအများကြီး